Muxuu Kylian Mbappe ka yiri su’aasha mar walba la weydiiyo ee la xiriirta inuu Real Madrid kusii jeedo? – Gool FM
Muxuu Kylian Mbappe ka yiri su’aasha mar walba la weydiiyo ee la xiriirta inuu Real Madrid kusii jeedo?
Abdirashid Mohamud June 12, 2019
(France) 12 June 2019. Weeraryahanka da’da yar ee koxda Paris Saint Germain Kylian Mbappe ayaa qaati ka taagan warbaahinta mar walba kusoo cel-celisa su’aasha ku saabsan inuu u dhaqaaqayo Real Madrid, si adag ayuuna uga jawaabay wax walba.
Xiddigaan tayada wanaagsan ayaa shabaqa soo taabsiiyay ciyaartii ay qarankiisa xasuuqeen Andorra goolkiisii 100-aad ee dhamaan tartamada oo dhan xul iyo kooxba, wuxuuna isagoo aan gaarin 20-sano u muuqdaa mid durba hilaaciyay waayahiisa kubadda cagta.
Xiddigaan reer France wuxuu saxaafadda u sheegay inaan la joogin waqtigii uu ka hadli lahaa arrimaha ku saabsan u wareegista Real Madrid.
“Hadda maahan waqtigii aan ka hadli lahaa waxa ku saabsan Real Madrid” ayuu yiri Kylian Mbappe.
“Mar walba waxaad ka hadashaan wax isku mid ah, balse maahan waqtigeeda”
Miyeey kooxda Chelsea ka laabatay go’aankii ay ku fasixi laheyd Maurizio Sarri??